DataNumen Outlook Express Repair -Ngenisa iMiyalezo eFunyenweyo kwiFolda yeMeyile kwi Outlook Express
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Express Repair Ngenisa iMiyalezo eFunyenweyo kwiFolda yeMeyile kwi Outlook Express
Ngenisa iMiyalezo eFunyenweyo kwiFolda yeMeyile kwi Outlook Express
Qaphela: Phambi kokungenisa elizweni, nceda uqiniseke ukuba Outlook Express imeyile apho imiyalezo izakungeniswa isebenza ngokuchanekileyo. Ngaphandle koko, nceda ukhuphele kwaye ucime ifayile ye-dbx ehambelana nefolda yeposi.
Start Outlook Express kwaye ugcine uvulekile.
Khetha yonke imiyalezo engeniswa ngaphakathi kulawulo lwemveliso:
Icebiso: Ukukhetha iqela leefayile zemiyalezo, bamba iqhosha le-SHIFT, cofa kwifayile yomyalezo ngaphezulu kweqela, emva koko ucofe umyalezo womyalezo ezantsi kweqela. Ukongeza iifayile zomyalezo kwiqela osele ulikhethile, bamba iqhosha le CTRL, uze ukhethe umyalezo kwiifayile ofuna ukuzongeza. Ukukhuphela ngaphandle imiyalezo ekhethiweyo yemiyalezo, bamba iqhosha le CTRL, emva koko ucofe umyalezo wefayile okhethiweyo.
Tsala imiyalezo ekhethiweyo kulawulo.
Shiya imiyalezo kwi tarfumana ifolda yeposi kwindawo evuliweyo Outlook Express.
Emva koko, unokusebenzisa imiyalezo engenisiweyo njengesiqhelo kwi Outlook Express.
Inyathelo 1, 2, 3 kwinkqubo yokungenisa ibonisiwe kophiliso olulandelayo: